Best Video edezi Software & ngwa ọdịnala n'ihi YouTube
Ịmepụta ezi YouTube video gụnyere ma agbapụ ndị video na mgbe ahụ edezi ya na-eme ka a ikpeazụ mmepụta. Naa, dị iche iche video edezi software na ngwa ọdịnala dị maka ị ịhọrọ site na, ọ ga-abụ ọnụ ala ma ọ ọnụ. Iji nyere gị aka ime ka a mma mkpebi, anyị kpokọta a ndepụta nke kasị mma video edezi software na ngwa ọdịnala n'ihi YouTube. Ngwá ọrụ ndị a ga-nyere gị aka Stitch ọnụ multiple gbaa n'ime a cohesive, kwenye dum e kere eke.
iMovie bụ Apple si n'ji-ọgwụgwụ video edezi software. Ọ bụ incredibly mfe na-eji na ndị bara uru ikpuru-n-dobe mma na-eme ka ọ dị mfe dezie gị videos. Na ya, i nwere ike tinye mmetụta, utu aha, soundtracks ma mezuo ọzọ video edezi ihe aga-eme gị video. Mgbe edezi a mere, ị nwere ike ozugbo ịhụchalụ ya, ichekwa na HD n'ihi na nnukwu-ihuenyo Ikiri, ọkụ na-DVD ma ọ bụ bugoo YouTube.
Mụta ihe banyere iMovie >>
# 2. Windows Movie Onye kere
Windows Movie bu Onye meworo a free oké video edezi ngwá ọrụ na kemgbe a akụkụ nke Windows usoro maka ọtụtụ afọ. Ọ na-akwado dị iche iche video formats na e dere dị iche iche video edezi ọrụ. Ị nwere ike mfe ikpokọta videos na vidiyo, tinye ikwu n'ụzọ na mmetụta, fanye music ma ọ bụ ụda na tweak playback ọsọ, post YouTube na ndị ọzọ.
Mụta ihe banyere Windows Movie Onye kere >>
# 3. Wondershare Filmora (mbụ Wondershare Video Editor)
Sistemụ: Windows & Mac
Wondershare Filmora (mbụ Wondershare Video Editor) na-ahapụ gị effortlessly dezie videos anya ịtụnanya. Ọ dị mfe, tinye n'ọrụ kpochapụwo edezi ọrụ dị ka mkpụbelata, akuku, bugharia na ọkachamara mgbakwunye dị ka nkecha aha meziri, yi nyo mmetụta, mgbanwe / ngagharị mmetụta. Ọ ọbụna na-ewe gị video ọbụna n'ihu na pụrụ iche atụmatụ dị ka Intro / Ebe E Si Nweta meziri, PIP, green ihuenyo, tilt nnofega, Mozis blur, ihu na anya na ndị ọzọ. Mgbe ị na-rụchaa gị video e kere eke, ka ha web-njikere bulite ka YouTube na Facebook.
Mụta ihe banyere Wondershare Filmora (mbụ Wondershare Video Editor) >>
Sistemụ: Windows & Linux
Lightworks bụ a free ma dị ike video edezi ngwá ọrụ. Ọ na-abịa a onye ọrụ-enyi na enyi interface, na-akwado nta ka ọ bụla video format ma na-enye dị iche iche ọkachamara-larịị ngwaọrụ. Ọ bụ ezie na ọ na-achọ a nkpoda mmụta usoro, ị ga-mesịrị chọta ya nwere ọtụtụ ihe na-enye. Ọ bụrụ na ị na-achọ ihe oké ọnụ ọkachamara YouTube video nchịkọta akụkọ, adịghị uche onye a!
Mụta ihe banyere Lightworks >>
# 5. Adobe Premiere Ihe
Adobe Premiere Ihe bụ a scaled-ala version nke Adobe Premiere Pro na e mere na-novice nchịkọta akụkọ ma na-azụ. Ọ bụ a mmefu ego ọkachamara video nchịkọta akụkọ ma-enye gị ohere arụ ọrụ ọ bụla video faịlụ Ọkpụkpọ, na e dere niile ngwaọrụ na ị ga-mkpa dezie ma Polish gị videos. Mgbe edezi usoro bụ n'elu, ị nwere ike ozugbo bulite vidiyo na Facebook ma ọ bụ YouTube.
Sony Vegas Pro bụ a elu-ọgwụgwụ video nchịkọta akụkọ juru n'ọnụ na egwu oké edezi atụmatụ. Ọ bụ dakọtara na fọrọ nke nta niile video formats na atụmatụ ezigbo oge multi-track video na ọdịyo edezi, mkpebi-onwe video sequencing, mgbagwoju mmetụta na compositing ngwaọrụ, nkwụnye na mmetụta nkwado, na Dolby Digital gburugburu ụda Ịgwakọta.
Mụta ihe banyere Sony Vegas Pro >>
Video toolbox bụ kemfe online video nchịkọta akụkọ nke na-enyere gị aka mfe ime dị iche iche video edezi aga-eme. Ọ na-akwado multiple video formats tinyere-enye elu àgwà mmepụta usoro. Main atụmatụ na-agụnye akuku, jikota, demux, hardcode ndepụta okwu nakwa dị ka tọghatara na download videos. Otú ọ dị, i nwere ike na bulite videos ruo 600 MB.
Mụta ihe banyere Video toolbox >>
Ị nwere ike mkpa a ọkachamara video edezi ngwa bee, dezie, jikota ma ọ bụ tinye music mgbe ọ bụla ozugbo. Ebe a AndroVid Video Editor pụrụ inye aka. E wezụga ndị bụ isi video edezi ọrụ, ọ na-enye ndị na uru nke na-agbakwunye ederede, okpokolo agba na mmetụta gị videos. Ị nwekwara ike ịhọrọ okpokolo agba gị videos nke a ga-gosiri na ihuenyo nke onyenlereanya mbụ. Niile, ọ bụ otu ezigbo YouTube video edezi ngwa n'ihi na Android.
Mụta ihe banyere AndroVid Video Editor >>
Sistemụ: iOS (iPhone & iPad)
YouTube Capture bụ Google raara nye iPhone na iPad ngwa n'ihi na Ndekọ na-ekere òkè video on YouTube. Ọ na-enyere gị weghara videos na Stitch ọnụ multiple mkpachị n'ime a enweghị nkebi e kere eke. Isi edezi ọrụ na-agụnye megharia ma ọ bụ ewepụtụ onye mkpachị, tinye a soundtrack si gị music collection ma ọ bụ ya audio n'ọbá akwụkwọ. I nwekwara ike bulite gị video ka YouTube na n'out oge biputere niile nke gị mmadụ netwọk.
Mụta ihe banyere YouTube Capture >>
Sistemụ: Android & iOS
Magisto bụ ihe dị mfe na-eji video edezi ngwa n'ihi na ị na ozugbo dezie gị vidiyo si na smart ekwentị. Dị nnọọ bulite gị video, họrọ ọkacha mmasị gị isiokwu na music ka ngwa-eme ndị ọzọ maka gị. Ọzọ mma mma bụ na, a ngwa nwere ike na-akpaghị aka ahọrọ ndị kasị mma Mpaghara si gị videos na ike obere vidiyo.
Mụta ihe banyere Magisto >>
Olee otú Bee / Kpaa / Split YouTube (FLV) Videos
YouTube Music ngwa Nyere Gee YouTube na ihuenyo anya
> Resource> égwu> Best YouTube Video edezi Software & égwu